umsizi wezinsiza usiza izikhungo zokunakekelwa kwezempilo emfundweni yesikhathi esithile
Inhliziyo yokusebenza nabantu
Ufunda ukusekela abasebenzi basebehlengikazi, njengokungathi bedla ukudla nokugcina amakamelo ahlukene kanye nezinto, ukuguqulwa nokugqoka imibhede. Uzofunda nendlela yokuqondisa abasebenzi ku-animation futhi uzokwazi wonke amagatsha omkhakha wezempilo.
Enye co-worker co-worker kuthatha isilinganiso iminyaka emibili kuya kwemibili.
Ungahlanganisa lolu hlelo nemfundo okufanele uyinakekele.
Ungabala futhi yonke into oyitholile emfundweni yangaphambili (njengokunakekelwa kokudla) njengamakhono afanele.
Ayikho ulwazi olukhethekile oludingekayo. Okubalulekile ukuthakazelisa ukusebenza nabantu.
Njengomsizi wezinsiza, uzokwazi ukuhlinzeka ukwesekwa kwimisebenzi yokusebenza ezindaweni ezihlukene zokunakekelwa. Isibonelo: ukugcinwa, inkonzo yokudla, amakamelo nezikhala eziphilayo, njll.
Ungaqala ngesitifiketi, kodwa le nkambo ihloswe njengenhlelo yangaphambi kokuqhubeka nokutadisha Ukuzilungisa, Zorgkundige of Imigwaqo ku Ingane.
Isisebenzi sakwa-logistics sifaneleka?
Ngakanani imali oyisebenzisayo njengomsebenzi we-logistics incike kakhulu emsebenzini wakho nokuthi ngabe isebenza yini emsebenzini noma ngezimpelasonto umsebenzi. Uma ufuna ukwaziswa okwengeziwe, xhumana nomeluleki wethu wemisebenzi kulolu hlelo.
Ngemuva kosizo lwakho lokuqeqeshwa kwe-logistics ungathuthukela ohlelweni Ukuzilungisa, Zorgkundige of Imigwaqo ku Ingane.
Ukuqeqeshwa kwabasebenzi basebenzi bezemfundo isikhathi esithile ngokuningiliziwe
Usebenza ngemuva Ukuqeqeshwa kwe-Logistics Assistant ngaphansi kokuqondiswa kwabanakekeli. Usekela abahlengikazi nabanakekeli ngokwenza imisebenzi eminingi. Awuhlanganyeli ekunakekeleni kwesiguli. Ukuqeqeshwa Umsizi Wokusiza ukuqeqeshwa ngesinyathelo ngesinyathelo kuya ku ukuqeqeshwa okunakekelayo. Ngemuva kwalokho, ungaqhubeka ngokukhethekile ohlelweni Zorgkundige.
Kubafundi abanolwazi, sisebenza ngenqubo esheshayo. Uzofanelekela lokhu uma usuvele uchithe unyaka wesine Ukudla okunomsoco-Ukunakekelwa baye balandela.